फरकधार / ३० पुस, २०७५
पशुपतिनगर– चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि आज बिहान जिल्ला अस्पताल इलाममा भर्ना गरिएको छ ।
१६ औँ पटकको अनसनको छैटौँ दिन आजसम्ममा डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि उनलाई जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।
वार्ताटोली सदस्य भण्डारीका अनुसार केसीको अवस्था नाजुक बन्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताए । डा. केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयक जनताका पक्षमा हुनुपर्ने, १५औँ अनसनका क्रममा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्ने सहितका छ बुँदे माग राखेर इलाममा यही पुस २५ गतेदखि अनसनमा छन् ।
प्रकाशित मिति : पुस ३०, २०७५ साेमबार ११:५८:३४,